Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4
Isingeniso Sesikhombi Sokuvala Isikhathi Sokukhanyisa Amakhandlela
1 Isingeniso Sesikhombi Sokuvala Isikhathi Sokukhanyisa Amakhandlela
2 Siyini Isikhombi Esisele Isikhathi Sokuvala Amakhandlela?
3 Sisebenza Kanjani Inkomba Yokuvala Isikhathi Sokukhanyisa Amakhandlela?
4 Ungasisebenzisa Kanjani Isikhombi Esihlala Isikhathi Sokuvala Amakhandlela seMT4
Abathengisi abaningi abasha baxoshiwe ekwenzeni ukuhweba okungasasebenzi ngoba nje bengalindelanga ukuthi ikhandlela livalwe. Isikhathi Esisele Sokuvala Amakhandlela iyithuluzi elingasiza abadayisi besikhathi besebenza ngempumelelo.
Siyini Isikhombi Esisele Isikhathi Sokuvala Amakhandlela?
Isibonisi Esisele Isikhathi Sokuvala Amakhandlela siyisibonakaliso esibonisa isikhathi esisele ngaphambi kokuthi isikhathi samakhandlela samanje sivalwe. Ngaphezu kwesikhathi esisele, ingakhombisa nesikhathi samanje seseva yomthengisi.
Sisebenza Kanjani Inkomba Yokuvala Isikhathi Sokukhanyisa Amakhandlela?
Isibonisi Esisele Senkathi Yokuvala Amakhandlela ngokuyisisekelo sihlanganisa umehluko phakathi kwesikhathi lapho ikhandlela elilandelayo lizovuleka nesikhathi samanje sekhandlela. Lokhu-ke kuboniswa njenge- “Isikhathi Esisele”. Lesi sibalo siboniswa ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini njengenombolo engaphandle kubakaki abayisikwele.
Le nkomba nayo ingasethwa ukuze ibonise “Isikhathi Seseva”, okuyisikhathi lapho iseva yomthengisi itholakala khona. Lesi sikhathi siboniswa eceleni kwesikhathi esisele futhi yisikhathi esingaphakathi kubakaki abayisikwele “[ ]".
Singakhetha inketho yokubonisa isikhathi seseva ngokushintsha okuguquguqukayo kwe- “Display Time Server” ngaphansi kwethebhu ethi “Okufakwayo” kusuka ku- 0 uku 1.
Ungasisebenzisa Kanjani Isikhombi Esihlala Isikhathi Sokuvala Amakhandlela seMT4
Phakathi Kwesikhathi Esisele nesikhathi Sesiphakeli, Isikhathi Esisele singasiza kakhulu abathengisi abaningi. Kodwa-ke iSeva Time isengasetshenziswa ngabahwebi abangathanda ukubeka isikhathi imisebenzi yabo ngokuya ngokuvulwa noma ukuvalwa kwemakethe, noma ukukhishwa kwezindaba ngokuya ngesikhathi sendawo semakethe. Lokhu kuwusizo ngokukhethekile ekuhwebeni kwesikhathi sokuphumula okuvame ukwenzeka ekuvulekeni kwemakethe noma ngesikhathi sokukhishwa kwezindaba. Noma kunjalo, Ama-forex broker server anesikhathi esifanayo kuwo wonke amabhangqa emali. Kanjalo, uma ungathanda ukubeka isikhathi ukuhweba kwakho kususelwa kulokhu, kusazodingeka ukuthi ukuguqulele lokho esikhathini sendawo yemakethe oyithengisayo.
Isikhathi Esisele ngakolunye uhlangothi singasetshenziswa ngabahwebi abathengisa ngazimbili zemali ezihlukile noma okokusebenza okuthengiswayo ngezikhathi ezibekiwe ezahlukahlukene. Lokhu kuvamise ukusetshenziswa ukuhweba ngesikhathi okudinga ukuvulwa nokuvalwa kwekhandlela ngalinye ukuqinisekisa ukusethwa kwezohwebo, okufana nezimpawu zamaphethini eziguqula izibani noma okufakiwe okuphuthumayo.
Khomba ukusethwa kokuhweba okunamandla njengephethini yokubuyisela emuva ye-bullish noma ukusethwa kokuqina kokuqina. Vula ukuhweba kokuthenga kuphela njengoba "Isikhathi Esisele" sehlela ku-zero futhi ukusethwa kusasebenza. Setha ukulahleka kokuma ekusekelweni ngezansi kwekhandlela lokungena.
Setha inkomba yenzuzo yokuthatha ngokuya ngokusethwa kwezohwebo bese uvumela intengo ukuthi ifinyelele kulitshe.
Khomba ukusethwa kokuhweba kwe-bearish njengephethini yokubuyela emuva ye-bearish noma ukusethwa kokuqina komfutho we-bearish. Vula ukuhweba okuthengiswayo kuphela njengoba "Isikhathi Esisele" sehlela ku-zero futhi ukusethwa kusasebenza. Setha ukulahleka kokuma ekumelaneni ngenhla kwekhandlela lokungena.
Le nkomba ayinikezeli amasiginali wokungena kwezohwebo noma izinkomba zokuqondiswa komkhuba. Noma kunjalo, okuhlinzekayo kubalulekile kubahwebi abangathanda ukuhweba ngokuya ngamasethaphu wokuhweba anembile.
Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4 yiMetatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungasifaka kanjani isibonisi sokuhlala isikhathi samakhandlela seMT4.mq4?
Landa Inkomba Yokuhlala Yesikhathi Sokuvala Amakhandlela se-MT4.mq4
Kopisha Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Isikhombi se-MT4.mq4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla kusikhombi sokuhlala isikhathi samakhandlela se-MT4.mq4
Inkomba ikhandlela Isikhathi sokuvala Inkomba ye-MT4.mq4 itholakala ku Ishadi yakho
Ungasusa kanjani inkomba yokuvala isikhathi sekhandlela ye-MT4.mq4 kwi-Ishadi yakho ye-Metatrader?
Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleUkungazinzi 2 Isinyathelo Izaziso MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoOHLC Channel MT5 Inkomba
Inkomba Yesaziso Sentengo ye-MT4
Shintsha Amaphesenti Inkomba ye-MT4
Inkomba Yesikhathi Esizayo ye-MT4
Izinkomba zeMvilophu zeMT4
Khombisa Inkomba Yokucela Ibhidi ye-MT4
Inkomba MA Inkomba ye-MT4
amr Juni 23, 2017 At 3:28 am